निमकहराम थिएनन कर्णेल जितबहादुर र किर्तिमानहरु (इतिहास) - Himalkhabar.com
टिप्पणीशनिबार, आश्विन १६, २०७२
निमकहराम थिएनन कर्णेल जितबहादुर र किर्तिमानहरु (इतिहास)
अंग्रेज रेजिडेन्ट र कप्तान अष्टमानबीच संवादको दैनिकी चलिरहेछ। रेजिडेन्ट सपरिवार बग्गीमा आएर टुँडिखेलमा महाराज चन्द्रशमशेरसँग बसेर १९६० सालको फूलपातीको बढाइँ हेर्छन्।
त्यसवेला चलेको रेजिडेन्ट र सेक्रेटरीको अदलाबदली हुने चर्चा अनुसार राजपुतानाका रेजिडेन्टले नोकरी छाडेपछि त्यहाँ कर्णेल भीड आउने र नेपालका रेजिडेन्ट र्‍यामोसा बडौदा जाने कुरा थियो, तर यिनले चाहिं यही बस्ने इच्छा गरेकोले थमौती भयो।
सेक्रेटरीमा मार्लबरो आउनेबारे कप्तानले सोध्दा उमेर कच्चा भएकोले संभव छैन भन्छन्, रेजिडेन्ट।
फेरि उही चौंरीका कुरा हुन्छ। अंग्रेज–भोट युद्धको तयारी जोडतोडसँग चलिरहेछ। युद्ध सामग्री र रसदपानी बोक्नलाई महाराजले १६ हजारसम्म चौंरी जम्मा गर्न सकिने, त्यसमध्ये ३५ सय सहयोगमा दिने र अरू भाडा तिरेर लैजानुपर्ने भनेका छन्।
चौंरीहरू लेकको घुमाउरो बाटोबाट लैजानुपर्ने, एकैचोटि पठाउन नमिल्ने, धेरै दिन लाग्ने हुँदा बाटोमा धेरै मर्ने सम्भावना थियो।
बरु, कुल्ली भरिया पठाउन सजिलो हुन्थ्यो। त्यसवेला कुल्लीको ज्याला खाना बाहेक महीनाको रु.१२ र नाइकेको रु.२० थियो।
त्यसवेला महाराजले दरबारका चारजना विशिष्ट अफिसर कर्णेल जितबहादुर, कर्णेल कीर्तिमान, मेजर दानबहादुर र मेजर अमरध्वजलाई अकस्मात् बर्खास्त गरेर घर गई बस भनिदिएका थिए।
त्यो कुरा कप्तानले सुनाउँदा चतुर रेजिडेन्टले त्यसको कारण नसोधी के छाड्थे! यी अफिसरहरू देवशमशेरका विश्वासपात्र भएकोले उनको सुरक्षा गारत थिए।
तर, देवशमशेरलाई बाँधेर गद्दीच्युत गरिंदा यिनीहरूले आफ्ना हातका हतियार पनि सरक्क सुम्पेर बसे। आफ्ना अन्नदाता निकालिंदा त केही प्रतिरोध गरेनन् भने केही गरी मलाई पनि यसैगरी कसैले निकाल्यो भने यिनले त्यसै गर्नेछन् भनेर महाराजले निमकहरामहरूलाई निकालेको कप्तानले बताए। यही प्रचार थियो।
यो भनाइ झट्ट सुन्दा सही लाग्छ, तर यसैलाई प्रमाण मानेर इतिहास लेख्नेले डोठ्याङ खान्छ। तात्कालिक इतिहासका पात्रले नै भनेको तथ्य भए पनि यसलाई धोईपखाली नगरी लेख्ता अनर्थ हुन्छ।
इतिहास तथ्यमा आधारित मात्र होइन, वैज्ञानिक पनि हुनुपर्छ। एउटा प्रमाण भेटियो भन्दैमा त्यसैको पछि दौडने हो भने साँचो इतिहास हराउँछ। यस विषयमा कतिपयसँग मेरो विवाद पनि पर्ने गरेको छ।
खासमा ती अफिसरहरू साँच्चै निकमहराम थिए भने आफू शक्तिमा पुगेपछि पनि महाराजले करीब अढाइ वर्षसम्म किन निकालेनन् त? यो विचारणीय प्रश्न हो।
वास्तवमा महाराजले भनेजस्तो र कप्तानले सुनाएजस्तो हुँदैहोइन, ती अफिसरहरू निमकको सोझो गर्ने राष्ट्रभक्त थिए।
अंग्रेजले भोटसँग युद्ध गर्दा नेपालले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष कुनै सहायता गर्नुहुँदैन, भोट हाम्रो मित्र हो, सन्धिअनुसार परेका वेलामा हामीले भोटलाई नै सहयोग गर्नुपर्छ, नत्र तटस्थ बस्नुपर्छ भनेर जोडदार कुरा राख्नेमा थिए, ती। त्यसैले निकालिएका हुन्।
अघि रणबहादुर शाहले विधवा बाहुनी राख्दा पनि विरोध गर्ने काका बहादुर शाहलाई जेलमा हालियो। आरोपमा चाहिं सम्पत्ति हिनामिना, शासनमा जथाभावी भनियो।
मित्रराष्ट्रलाई बहादुर शाहका दोषैदोष देखाइयो। पछि उही बाहुनीका छोरालाई राजा बनाउने लालमोहरमा सही नगर्दा बहादुर शाहलाई कुटी–कुटी जेलैमा मारियो, झुन्ड्याइयो अनि झुन्डिएर मरे भनियो।
मित्रराष्ट्रमा चाहिं उपचार गर्दा गर्दा केही लागेन, अतिसारको व्यथाले मरे भनेर लेखियो।
त्यस्तै, राजाका खोपीभित्र राति नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री माथवरसिंह थापा मारिए। भोलिपल्ट राजाले माथवरलाई मैले गोली ठोकें भनेर घोषणा गरे। राजाले भनेको सबैले पत्याए पनि।
रेजिडेन्सीबाट कलकत्ता पठाएको पत्रमा भने शंकै गरिएको थियो। पछि जंगबहादुरले ‘मैले नै मामालाई मारेको हुँ’ भनेपछि मात्र साँचो कुरा बाहिर आयो।
कतिपय घटनाको सत्य भित्रै छिपिरहेको हुन्छ। अन्तर्निहित सत्य पत्ता लगाउन नसक्दा अन्तर्दशा नहेरी–नबुझी मूल दशाबाट गरेका ज्योतिषीको फलादेश जस्तो मात्र हुन्छ।